युवाहरुमा मधुमेहको समस्या किन बढ्दैछ? जोगिने कसरी? डा मल्लसँग भिडियो वार्ता :: रिता लम्साल :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
विश्व मधुमेह दिवस युवाहरुमा मधुमेहको समस्या किन बढ्दैछ? जोगिने कसरी? डा मल्लसँग भिडियो वार्ता
मधुमेहले आँखा, मिर्गौला, मुटु, नशा र खुट्टामा पनि असर गर्छ
रिता लम्साल आइतबार, कात्तिक २८, २०७८, ०६:०९:००
काठमाडौं– पछिल्लो समय युवाहरुमा मधुमेहको समस्या बढ्दै गएको वीर अस्पतालका मधुमेह तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डा दिपक मल्ल बताउँछन्।
तनाव, चिन्ता, अस्वस्थकर खानपान, अनिद्राको समस्या, शारीरिक तथा मानसिक रुपमा सक्रियता कम हुँदा पनि युवाहरुमा मधुमेहको समस्या बढ्दै गएको डा मल्ल बताउँछन्। डा मल्लसँग हामीले मधुमेहको समस्या हुनुको कारण, लक्षण, उपचार, अहिलेको अवस्था तथा मधुमेह सम्बन्धि भ्रम र यर्थाथताको विषयमा कुराकानी गरेका छौं।
प्रस्तुत छ डा मल्लसँग गरिएको कुराकानीः
मधुमेह के हो? मानिसहरूमा यो समस्या के कारणले हुन्छ?
मधुमेहलाई अंग्रेजीमा डाइबिटिज मेलाइटिस भनिन्छ। डाइबिटिज र मेलाइटिस भनेको पिसाबबाट चिनी बग्नु हो। पहिला पहिला थाहा हुँदैन थियो। किनकी रगत जाँच गर्ने चलन थिएन। पिसाब फेरिसकेपछि पिसाबको वरिपरि कमिलाहरु आयो भने त्यो व्यक्तिलाई चिनी रोग लागेछ भन्ने गरिन्थ्यो। हाम्रो शरीरमा प्यांक्रियाज भन्ने ग्रन्थी हुन्छ। सो ग्रन्थीमा ‘बेटा सेल’ हुन्छ। बेटा सेल ग्रन्थीले इन्सुलिन निकाल्छ। इन्सुलिनले शरीरमा रहेकव् सुगरलाई ठाउँ ठाउँमा लगेर राख्ने काम गर्छ। हाम्रो शरीरमा बेटा सेलले काम नगरेको अवस्थामा इन्सुलिन उत्पादन हुँदैन। जतिबेला हामीलाई टाइप १ मधुमेह हुन्छ। इन्सुलिन पनि उत्पादन भएको छ तर त्यसले शरीरमा राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन विभिन्न कारणले भने त्यसलाई हामी टाइप २ मधुमेह भन्छौं। टाइप १, टाइप २ र प्यांक्रियाजको आफ्नै रोगहरु छ भने त्यसलाई प्यांक्रियाटिभ डाइबिटिज भन्छौ। कहिलेकाँही महिलाहरुमा गर्भावस्थाको २६ देखि २८ हप्तामा सुगर लेबल बढ्ने गर्दछ। यसलाई हामी जेस्टेशनल डाइबिटिज भन्ने गर्छौं। अन्य विभिन्न किसिमका डाइबिटिजहरु पनि छन्।
कस्ता व्यक्तिलाई मधुमेहको समस्या हुने जोखिम रहन्छ?
परिवारमा बुबा आमालाई मधुमेहको समस्या छ भने उसका छोराछोरीमा पनि मधुमेह हुने जोखिम बढी नै हुन्छ। प्रि डाइबिटिज पनि हुन्छ। यो भनेको डाइबिटिज भनेर एकिन नभइसकेको तर डाइबिटिज हुन सक्ने अवस्था देखिएको हो। जस्तो शरीरमा सुगरको लेबलको मात्रा बढेको देखिन्छ। यस्तो व्यक्तिलाई डाइबिटिज हुने जोखिम उच्च रहन्छ। बुबाआमालाई पनि डाइबिटिज छ उसका छोराछोरीलाई पनि हुने खतरा रहन्छ। अर्को जसमा मोटोपनाको समस्या छ, बडी मास इन्डेक्स (बिएमआई) २५ भन्दा ज्यादा छ भने उसमा मधुमेह हुने जोखिम उच्च रहन्छ। उच्च रक्तचापको समस्या भएका व्यक्तिमा मधुमेहको समस्या हुने जोखिम पनि उच्च छ। जसले नियमित शारीरिक व्यायामहरु गर्नुहुन्न उहाँहरुलाई पनि मधुमेह हुने खतरा उच्च रहन्छ। अफिसमै बसिरहने, जहाँ जाँदा पनि सवारीसाधनको प्रयोग गर्ने, नहिँड्ने व्यक्ति तथा कोलेस्टोर लेबल धेरै भएका व्यक्तिमा पनि मधुमेहको जोखिम उच्च रहन्छ। यस्तै महिलाहरुमा अण्डासय सम्बन्धि रोगहरु छ भने पनि मधुमेह हुने सम्भावना बढी नै हुन्छ।
मधुमेहको समस्या भएको कसरी थाहा पाउने? कस्ता कस्ता लक्षण देखिन्छन्?
म कार्यरत वीर अस्पतालमा धेरै जस्तो बिरामी दुर्गमबाट आउँछन्। दुर्गमबाट आएका बिरामीहरुमा मधुमेह भनेको के हो भन्ने नै थाहा पाउनु भएको अवस्था देखिँदैन। कतिपय अवस्थामा लक्षणहरु नदेखिएर मधुमेह भएको र कम्प्लिकेसन देखिएर उपचारका लागि आइपुग्छन्। जस्तो आँखा नदेख्ने समस्या, मिर्गौला बिग्रिएको अवस्था, खुट्टामा घाउ भएको, मुटुमा समस्या, नशाको समस्याहरु लिएर आउने बिरामीमा ती रोगको कारण मधुमेह देखिन्छ।
लक्षण देखिएको अवस्थामा प्राय मानिसहरुको मुख सुख्खा हुने, दुब्लाउँदै जाने, आँखा धमिलो हुँदै जाने, गिजाहरु पाक्ने, शरीरको तौल कम हुँदै जाने, शरीरमा चिलाउने समस्याहरु हुने, झम्झमाउने, पोलेजस्तो हुने, घोचेजस्तो हुने र घाउहरु आउने, कान चिलाउने, कान कम सुन्ने समस्याहरु हुनसक्छ। यो सबै लक्षणहरु हुनैपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। तर यो मध्ये कुनै एक समस्या छ र परिवारमा यसअघि कसैमा मधुमेहको समस्या छ भने मधुमेह हुनसक्ने आशंका गरी परीक्षण गर्नै पर्छ।
मुधमेह परीक्षण गर्न अहिले गाह्रो छैन। नजिकको प्रयोगशालामा गएर सुगरको मात्रा परीक्षण गर्न सकिन्छ। फास्टिङमा जाँच अर्थात ८ वा १६ घण्टा खाली पेट बसेर सामान्य जीवनशैली, तनाव वा अन्य चिन्ता नलिइ चिकित्सककहाँ गएर सुगरको मात्रा जाँच गर्न सकिन्छ। अर्को खाना पछिको सामान्य खाना खाएर परीक्षण गर्ने र अर्को भनेको एचविएवानसी अर्थात प्रत्येक तीन महिना वा प्रत्येक ६ महिनामा सुगरको परीक्षण गराउने। यसका साथै मिर्गौला परीक्षण गर्ने, आँखा परीक्षण गर्ने पनि गर्नुपर्छ।
मधुमेहले शरीरको अन्य कुन कुन अंगहरूमा असर पार्छ? किन र कस्तो असर पार्छ?
मधुमेहको कम्प्लिकेशनले शरीरका अंगहरुमा असर पार्छ। त्यसैले मधुमेहका बिरामीको उपचार गर्दा सुगरलाई मात्र टार्गेटमा ल्याउने होइन। सुगरलाई टार्गेटमा ल्याएर शुरुमा खाली पेटमा र खानापछिको सुगरको जाँच गरिन्छ। त्यसपछि एचविएवानसी गरिन्छ। फास्टिङ ७० देखि १४० को रेन्जमा वा पिपि पनि १८० भन्दा कमको रेन्जमा अथवा एचविएवानसी पनि ७ को रेन्जमा ल्याउन सकियो भने कम्प्लिकेशनहरु कम गराउन सकिन्छ।
त्यसैले हाम्रो उद्देश्य भनेको बिरामीलाई चेतना दिएर वा सल्लाह दिएर औषधिको डोजहरु मिलाएर मधुमेहलाई नियन्त्रणमा ल्याउने हो। तर कन्ट्रोलमा आउन सकेन भने मुख्य गरी आँखाको समस्या, मिर्गौलामा समस्या र खुट्टामा समस्या देखिन्छ। आँखा, मिर्गौला, मुटु, नशा र खुट्टामा असर पुर्‍याउछ।
यो समस्या मधुमेह हुने बित्तिकै आउने होइन। १० वर्ष, १५ वर्ष वा २० वर्षपछि आउछन्। सामान्यतया मधुमेहको समस्या भएको १५ वर्षमा यस्ता समस्याहरु देखिन्छ। यदी मधुमेह नियन्त्रण गर्न सकिएन भने जोखिम बढ्दै जान्छ। अब यी अंगमा कस्तो समस्या आउँछ भन्दा आँखाको पर्दामा समस्या आउँछ। आँखा धमिलो हुँदै जान्छ र अन्धोपनको समस्या समेत हुनसक्छ। तर यो एक्कासी हुँदैन। त्यसैले हामीले बिरामीहरुलाई आँखा धमिलो हुँदै गएको छ भने तुरुन्त आँखा चिकित्सककोमा रेफर गर्छौँ। मिर्गौलाको समस्या पनि त्यस्तै हो। पिसाब बाक्लो आउने, यौनांग चिलाउने, पिसाबमा फिँजहरु आउने गर्छ भने प्रोटिन, एल्बुमिन लिकेज भइरहेको छ। मधुमेहका बिरामीमा यस्तो समस्या देखिन्छ। यस्तो समस्यालाई समयमै पत्ता लगाउनुपर्छ।
अर्को कुरा खुट्टा झम्झमाउने, पोल्ने, जमिनमा टेक्दा पैतला बाक्लो भएजस्तो हुने, जुत्ता बढी टाइट हुँदै जाने, घाउहरु आउने, हिँड्दा हिँड्दा चप्पलहरु फुत्किएर जाने गर्छ भने यो मधुमेहले पारेको असरको कारण हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा तुरुन्त मधुमेह परीक्षण गर्नुपर्छ। आँखा, मिर्गौला, मुटु, नशा सम्बन्धि समस्याका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई जचाउनु पर्छ। रक्तचाप पनि नियमित जाँच गर्नुपर्छ। किनभने मुटुमा पनि समस्या आएको हुनसक्छ।
पछिल्लो समय युवा उमेरमै मधुमेका बिरामी धेरै देखिन थालेको कुरा आइरहेको छ नि? तन्नेरीमै किन मधुमेह देखिन थाल्यो?
यसको कारण तनावको लेबल नै हो। अहिलेका युवाहरुलाई धेरै नै तनाव छ। हामीले देख्छौं युवाहरुमा मधुमेहको समस्या धेरै छ। यसको कारण शारीरिक क्रियाकलाप कम हुने, तनाव धेरै हुने, खानपिनको कारण नै हो।
अर्को कुरा मोटोपनाको समस्या पनि एक हो। यदी परिवारमा कसैलाई मधुमेहको समस्या छ भने मोटोपनाको समस्या आफूमा आउन दिन हुदैन। बाहिरको खाना भन्दापनि आफैंले बनाएर खाएको राम्रो हुन्छ।
नेपालमा मधुमेको समस्या भएका बिरामीको संख्या र अवस्था कस्तो छ? के छन् यसका आँकडा र तथ्यांकहरु?
१४ नोभेम्बरमा हामी अन्तराष्ट्रिय मधुमेह दिवस मनाइरहेका छौं। यही दिन यो दिवस मनाउनुको अर्थ इन्सुलिन पत्ता लगाउने वैज्ञानिकको जन्मदिन हो। इन्सुलिन पत्ता लगाइएको १०० वर्ष भइसक्यो। सन १९९१ देखि हामीले अन्तराष्ट्रिय मधुमेह दिवस मनाइरहेका छौं। मधुमेहका बिरामीले इन्सुलिन पाइरहेको छ वा छैन? उपचार पाइरहेको छ वा छैन, मधुमेहबारे सचेतना पाएको छ वा छैन भन्ने विषयमा सचेतना जगाउने यो दिवसको उद्देश्य हो।
औषधिले, व्यायामले, खानपानमा ध्यान दिएर मात्र हुँदैन। मधुमेह नियन्त्रणका लागि पारिवारिक वातावरणमा खुसीयाली हुन पनि आवश्यक छ। तनाव कम हुनुपर्छ।
नेपालमा करिब ४ प्रतिशत मानिसमा मधुमेहको समस्या छ भन्ने गरिन्छ। तर यकिन तथ्यांक भने छैन। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा युवाहरुमा मधुमेहको समस्या अत्याधिक बढेको छ। विशेषगरी विदेश गएर फर्किएका युवाहरुमा यो समस्या बढेको देखिन्छ। खाडी मुलुक, मलेसिया लगायतका देशहरुबाट फर्किएका युवाहरुमा मधुमेहको समस्या अत्याधिक बढेको छ। मेरो विचारमा घर परिवारबाट टाढा रहँदा तनाव बढी हुने, काम धेरै हुने पर्याप्त मात्रामा सुत्न नपाइने लगायतका समस्याले गर्दा पनि उहाँहरुमा मधुमेहको समस्या बढी देखिएको हुनसक्छ।
हामीले मधुमेहका बिरामीलाई खाना खाइसकेपछि हल्का हिड्न सुझाव दिने गर्छौं। दिनमा ६ देखि ८ घण्टा राम्रोसँग निदाउनु पर्छ, सुत्नपर्छ। सायद विदेशमा यस्तो समय नमिल्ने, खानेकुराहरु फास्टफुडहरु बढी भएर पनि विदेशबाट नेपाल आउनेहरुमा मधुमेहको समस्या बढी भएको होला।
मधुमेहका समस्या भएका बिरामीको खानपान कस्तो हुनुपर्छ?
परिवारमा जस्तो खाना छ त्यस्तै खाने हो। तर सकेसम्म कार्बोहाइड्रेड कम खानुस् भन्ने सल्लाह दिन्छौं। जस्तो भात, आलु कम खानुपर्छ। त्यसको अवला माछा मासु ठिक्क मात्रामा खाने, सलाद तथा झोल तरकारी, दालहरु खाने गर्नुपर्छ। तर खाँदै नखाने होइन। घरपरिवारमा कुनै पार्टीहरु हुँदा परिवारका सबै सदस्य जाने तर मधुमेह भएको बिरामी नजाने गर्नु हुँदैन। जान सकिन्छ। खान सकिन्छ। नाच्ने रमाउने गर्न सकिन्छ। बाहिरको खाना, गुलियो, चिल्लो तारेको खानेकुरा चाँही कम खानुपर्छ। कतिपय नेपालीको बानी भोलि खानु छ भने आज केही नखाने वा पर्सि खाँदिन भन्ने सोच हुन्छ। यस्तो बानीले मधुमेहका बिरामीलाई भने असर पर्छ। काँही भोजहरु छ भने अत्याधिक खाने, डाक्टरलाई देखाउनु छ भने केही दिन खानामा कन्ट्रोल गर्ने औषधि नखाइदिने, वा धेरै खाने बानी पनि धेरैको छ। मधुमेको अवस्था पहिचानका लागि सामान्य अवस्थामै जाँच गर्नुपर्छ।
मधुमेहको समस्या हुनै नदिन वा नियन्त्रण गर्न के गर्ने?
मधुमेहको समस्या हुनै नदिने उपाय नै त छैन। किनकी यो म आउदै छु भनेर आउने समस्या होइन। तर मधुमेहको समस्या भएमा यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। परिवारमा कसैलाई पहिला नै मधुमेहको समस्या छ, आफु मोटो हुँदै गएको छ, शारीरिक क्रियाकलाप कम छ भने आफूलाई सुधार गर्नुपर्छ। मधुमेहलाई प्रिडाइबिटिज अवस्थामै पत्ता लगाउने र उपचार गर्ने गर्नुपर्छ। व्यायाम गर्ने, अल्छिपना नगर्ने, पारिवारिक रुपमा रमाइलो गर्ने, खानपानमा ध्यान दिने गर्नुपर्छ। र मधुमेहको लक्षण देखिएको छ भने समयमै जचाउन पर्छ। समयमा मधुमेह पत्ता नलाग्दा मधुमेहको समस्या बढ्दै जान्छ र त्यसले ठूलो असर गर्न सक्छ।
वीर अस्पतालमा आउने बिरामीहरु कस्तो अवस्थामा मधुमेह परीक्षणका लागि आइपुग्ने गरेका छन्?
अहिले विभिन्न संघसंस्थाहरुले सचेतनाको कार्यक्रमहरु गर्ने, सामाजिक सञ्जाल टिकटक लगायतका माध्यमबाट हामी चिकित्सकहरुले पनि सचेतनाका कुराहरु प्रस्तुत गर्ने गर्दा कतिपय मानिसहरु मलाई मधुमेहको जस्तो लक्षण देखियो भन्दै पनि आइपुग्छन्। तर दुर्गमबाट आउने बिरामीहरु भने आँखामा समस्या देखिएपछि, मिर्गौलामा समस्या देखिसकेपछि आउने गरेको पनि पाइन्छ।
हाम्रो सरकारी अस्पताल भएकाले र रेफरल हुने अस्पताल भएकाले दुर्गमबाट आउने बिरामीहरुमा बढी मधुमेहले समस्या देखिएपछि नै आइरहेको पाइन्छ। दिनमा १०–१५ जना बिरामी मलाई मधुमेहको समस्या छ कि भन्ने आशंकामा परीक्षण गर्न आउँछन् भने दिनमा ६०–७० जना मानिसहरु मधुमेहले समस्या देखिएको अवस्थामा आइपुग्ने गरेको देखिन्छ।
मधुमेहको समस्या भएका बिरामीले गुलियो पदार्थ खानै नहुने हो? वा कति मात्रामा खान सकिन्छ?
गुलियो पदार्थ खाएर मधुमेह हुने होइन। तर गुलियो पदार्थ खाएपछि त्यसलाई पचाउन सक्नुपर्छ। अर्थात कसैले तपाईंलाई लड्डु नै ल्याएर दियो भने मधुमेह छ भनेर खाने वा नखाने? यस्तो अवस्थामा म खान्न भन्नुभन्दा त्यो खाएर आधीघण्टा नाँच्ने, उफ्रने वा हिँडडुल गरेर रमाउने गर्दा तपाईंलाई समस्या नहुन सक्छ। तर त्यही लड्डु खान पाइन मधुमेहको समस्या हुन्छ भनेर बेलुका तनाव लिएर बस्दा त भोलिपल्ट मधुमेहको समस्या बढ्छ। त्यसैले हामी खाएर व्यायाम गर्न सुझाव दिन्छौं। खाँदै नखाने होइन, तर कम मात्रामा खाने, खाएर इनर्जी लस गर्नुपर्छ। पसिना निकाल्नुपर्छ।
सुगर फ्रि गुलियो पदार्थहरु पनि बजारमा पाइन्छ भन्ने विज्ञापनहरु देखिन्छ। सुगर फ्रि चिनी हुन्छ?
अहिले हामीकहाँ आर्टिफिसियल ट्याब्लेटहरु त हुन्छ। हामीले सिफारिस पनि गर्छौँ तर सुगर फ्रि चिनी नै त हुँदैन।
मधुमेहसँग जोडिएका धेरै भ्रमहरु छन्। हजुर कहाँ पनि उपचारका लागि आउने बिरामीले के कस्ता भ्रमहरु सुनाउँछन्? उनीहरुलाई के सुझाब दिन चाहनुहुन्छ?
मधुमेहको समस्या भएका व्यक्तिहरु औषधि खान एकदमै हिचकिच्याउँछन्। यदी कुनै औषधिले तपाईंलाई फाइदा गर्छ भने त त्यो खानुपर्छ। अर्को कुरा औषधि निरन्तर खाइराख्नु पर्छ भन्ने डर पनि देखिन्छ। यो कुरा चाँही सत्य हो। तर सुगर नर्मल हुँदा हुँदै पनि कहिलेकाँही औषधि चलाउनुपर्छ।
डाक्टरको निगरानीमा औषधि खानुपर्छ। अहिले कोरोनाले गर्दा बिरामीहरुलाई समस्या पनि परेको छ। यस्तो अवस्थामा बिरामीले ग्लुकोमिटर किनेर आफैंले जाँच गर्न पनि सक्छन्। समस्या देखिएको छ भने समस्या अनुसार सल्लाह सुझाब भर्चुअल रुपमा पनि दिन सकिन्छ। खानपान, औषधि लगायतका कुरामा बढी भ्रम राख्छन्। हामी यथार्थ जानकारी दिन्छौं।
नेपालमा मधुमेहको समस्या भएका बिरामी सबै उपचारको पहुँचमा छन् वा छैनन्? यदि छैनन् भने उनीहरुलाई उपचारको पहुँचमा ल्याउन के गर्नुपर्छ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा सरकारले सबै क्षेत्रमा मधुमेहको विशेषज्ञ डाक्टर नै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा भएका एचए, पारामेडिक्स, नर्सहरुलाई मधुमेह पहिचान गर्ने, बेसिक उपचार गर्ने तालिम दिन आवश्यक छ। पछि समस्या आइसकेपछि भन्दा समयमा रेफर गर्नुपर्छ त्यसका लागि स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिनैपर्छ।
अहिले कोभिडको महामारी छ। मधुमेहका बिरामीले यो समयमा थप के कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ?
कोरोनाको लक्षण देखिएको छ र मधुमेहको पनि बिरामी हुनुहुन्छ भने मधुमेहको औषधि खान नछोड्नु। मधुमेहका बिरामीलाई अन्य रोगले आक्रमण गर्ने सम्भावना उच्च रहन्छ। त्यसैले निमोनिया हुने जोखिम उच्च रहन्छ। यस्तो अवस्थामा मधुमेह, निमोनिय र कोभिड सबैले गर्दा मधुमेहका बिरामीको कोरोना लागेपछि मृत्यु हुने जोखिम पनि रहन्छ। त्यस्तै कतिपय अवस्थामा अन्य रोगको औषधिले मधुमेहको जोखिम पनि हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित डाक्टरसँग परामर्श लिएर औषधिहरु खानुपर्छ। कोरोना महामारीको समयमा कतिपय मधुमेहका बिरामीले औषधि अभावको अवस्था भोग्नुपर्‍यो, इन्सुलिन औषधि अभाव भयो, घरमै बस्दा शारीरिक क्रियाकलाप कम भयो यसले गर्दा पनि कोरोनाको अप्रत्यक्ष असरले पनि मधुमेहको समस्या बढ्यो।
रोग लाग्यो भन्दैमा निराश हुनु हुँदैन। हरेक रोगको समयमा उपचार गर्दा उपचार सम्भव छ। सम्बन्धित डाक्टरलाई भेटेर उपचार तथा परामर्श लिनुपर्छ। चिकित्सकले दिएको औषधि भनेको समयमा नियमित खानुपर्छ। शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्छ। मानसिक तनाव तथा चिन्ता लिनु हुँदैन। ६ देखि ८ घण्टा सुत्नुपर्छ। घरायसी कामहरु आफैंले पनि गरेर शारीरिक र मानसिक रुपमा स्वस्थ हुनुपर्छ।